Irkutsk State University - Fumana Higher Education in Russia
Irkutsk State University Iinkcukacha
isixeko : Irkutsk
isifinyezo : IMIBA
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa Irkutsk State University
Babhalise e Irkutsk State University
Irkutsk State University yasekwa ngo-Oktobha 1918 e Irkutsk.
Kwezintsuku Irkutsk University State kukho abafundi elikhulu loqeqesho iziko yenzululwazi yokufundisa lezingluntu, endalo, inzululwazi zobugcisa yasetyenziswa. izibonelelo ISU ziquka 7 kumaziko emfundo, 10 amandla, 1 yesebe Bratsk, kwithala lwezenzululwazi yenye amathala inkulu iYunivesithi eRashiya. ISU inika isidanga, inkosi, Iinkqubo post-graduate ngaphezu 18000 abafundi ukuba babe nethuba lokuba ukugxininisa phantsi kweliso izazinzulu kwihlabathi-eyaziwa.
Phakathi kwezinye izibonelelo Irkutsk University State na iZiko loQeqesho Advanced ngokutsha, 3 ngamaziko ophando, Nqila Institute of Social Sciences, Center for New Information Technologies, Uphando iBaikal and Education Center, sebe post-graduate kunye zobugqirha nezifundo, iilayibrari yenzululwazi, Astronomical Observatory umyezo botanic.
Lani University kunye namaziko afumaneka kwiindawo 9 izakhiwo zemfundo yaseIrkutsk e Bratsk. Uninzi lwezi zakhiwo zexabiso elikhulu kwimbali kunye nezakhiwo. Baya asusela 18-19 eminyaka. abafundi abakhulu zonke amandla kuba izifundo ezizodwa kunye nokufunda kwiilebhu kunye namaziko ophando lwenzululwazi Sycamores kunye Siberian yeSebe ye Russian Academy of Sciences.
eminyaka, Irkutsk University liqeqeshe ngaphezu 80 ziingcali kakhulu amawaka, izazinzulu adumileyo, ootitshala, ababhali, kwaye abalawuli, kuquka abaphumeleleyo Prize State and ababhali abadumileyo abanetalente V. Rasputin, A. Vampilov, kwaye M. Sergeev.
Nangona umgama welizwe ukusuka ikomkhulu Russia, eMoscow, AseIrkutsk Irkutsk Oblast, kummandla entle yelizwe, kunjalo kuba ubutyebi bembali, kwemozulu Siberian, kunye namathuba kakhulu ezityeleleyo abafundi kunye nabemi.
1. LaseIrkutsk imi kanye intliziyo eSiberia. ikomkhulu lalo isixeko Irkutsk. Umgama ukusuka eMoscow ukuya Irkutsk yi amawaka amahlanu eekhilomitha. Lo oblast zeeteksi ngaphandle 6th 20 imimandla kwezopolitiko eSiberia ngokubhekiselele kwindawo. Lo moya uba iwonga ngamazwe kunye ngendibaniso iintlanga ezininzi ezikufuphi.
2. Imbali laseIrkutsk kuthatha ekuqaleni kwayo 1682 xa Domain (Voivode) Irkutsk kwasekwa leyo koko lahlengahlengiswa yaba kwiphondo 1719. Xa lonke oblast, nazi 2.700.000 abahlali olubalelwa 30% yonke abemi Eastern eSiberia. Isixeko iphambili yalo mmandla ngumzi Irkutsk, esakhiwa 1661, nokugcina unanamhla ngaphezu 600,000 abantu.
3. LaseIrkutsk iphawulwa njengokuba imozulu kabukhali elizwekazi ebusika ixesha elide kakhulu yaye abandayo noneemvula encinane kwakudalwa. Noko, le ehlotyeni rather ezifudumeleyo kufumile. Umndilili lobushushu womnyaka akuthethi excede 0ºC naphi na oblast.
Ngenyanga ibandayo yasebusika, EyoMqungu, ubushushu iyahluka ukusuka -20 ukuba -50ºC. ngoJulayi, ngenyanga zikhuthazayo, ubushushu oqhelekileyo + 18ºC kunye lobushushu ubuninzi 37ºC +. Ixesha elide kusebusika, kubetheleleke avareji 180-200 iintsuku. Ngakumbi ebusika onayo ithuba elilodwa ukucinga abone ubuhle ebusika komzi, ummandla, kwaye iBaikal. Malunga nenani leentsuku ezishushu, AseIrkutsk inxalenye esemazantsi le oblast iyafana California Southern, nama 300 imihla abanelanga ngonyaka.
4. Irkutsk namhlanje zoshishino eziphambili, zemfundo, kunye neziko yenkcubeko. Esi sixeko uxoshiwe imi kakuhle kwi kweenxweme Angara lomlambo, 65 km ukusuka Lake iBaikal.
Irkutsk likhaya omnye amasebe Scientific Academy, nokugcina namaziko ezisibhozo inzululwazi. Kukho kwiiyunivesithi ezilishumi, iilayibrari mathandathu anesibhozo, izikolo asibhozo, yemiboniso yeqonga, yemiboniso zomculo, nopopi, yokubonela abantwana, iholo ilungu, iindawo zolonwabo, zokutyela, yaye inkitha iikhefu, bonke ibekwe Irkutsk.
Izimvu School Business International
Institute of Mathematics, Economics and yokwazisa
International Institute of Economics and Ezolimi
ekufundiswa ngayo Institute
Faculty of Studies Religious kunye Theology
Faculty of Philology nobuntatheli
Irkutsk State University yayisekelwe EyeDwarha 27, 1918.
Wawunika angxamele ukuya kuphuhliso lwemfundo ephakamileyo eSiberia Russian East Far. Irkutsk University State yaba yemfundo ezinkulu, iziko yenzululwazi kunye nenkcubeko kwi indawo enkulu eMpuma eSiberia kwaoko. Ekuqaleni kwakukho amabini kuphela namacandelo e-University: Faculty of History and Philology kunye noMthetho Faculty.
1919 Ukuvulwa ISebe laseMpuma apho olwimi, isiMongoliya, IsiTshayina, Tibetan, kwaye Japanese zazifundiswa. Physics-Mathematics Faculty yasekwa.
1920 isebe Medical iba Faculty ezimeleyo.
1930 Ngokuhlanganisa eyunivesithi: amayeza, ezezimali-Economics, kunye namaziko pedagogy Kwasekwa.
1941-1945 Ngexesha leMfazwe Patriotic Enkulu ngaphezu 100 amalungu abasebenzi eyunivesithi waya ngaphambili.
1947 Nokwakheka kunye chemistry zophando lwezenzululwazi ziko lamiselwa ukuba yinxalenye yale yunivesithi
1949 kwasekwa Geology Faculty.
ISebe le-East-Siberian Academy of Sciences yavulwa Irkutsk.
1950s Abaphandi ukusuka yunivesithi kunye noogxa le Irkutsk Geological Survey kwaye isebe laseMpuma-eSiberia of the Academy of Sciences wathabatha inxaxheba roject kubangele ekwakhiweni izityalo ngamanzi e Irkutsk and Bratsk.
1954 UMthetho Faculty yavulwa.
1959 computer centre exhotyiswe umatshini computing electronic (ECM) kwavulwa.
1966 Qala yokwakha isakhiwo kwiyunivesithi entsha Akademgorodok. Esi sakhiwo yavulwa 1973.
ekupheleni 1960 Isakhiwo esitsha eyunivesithi-storeyed ezine bakhelwe amandla ezine kunye namasebe zabo.
1970 ESoviet-Mongolian Khubsugul hambo oluhlangeneyo yaphehlelelwa ngokudibene ne yunivesithi kunye Mongolian State University kunye inxaxheba izazinzulu ukusuka Siberian ihlumelo eliveliswe * Academy of Sciences kunye nezinye iiyunivesithi e Irkutsk. Abathathi-nxaxheba kwi hambo kwakhokelela isifundo joint yamanzi endalo isitya amanzi Khubsugul elwandle kunye amanzi kwezimbiwa of Mongolia. Lipapashe "Atlas of Khubsugul Ichibi" kwaye imephu "Mineral Yamanzi Mongolia."
1991 Wapin yaba phantsi kolawulo iKomiti State of Science and Higher Education of RSFSR (Rhashiya)
1993 Le Faculty of Psychology and Work Social yavulwa.
1998 Izimvu Deep Underwater Neutrino Telescope yaphehlelelwa ukusetyenziswa kunye kule mini uhlala teleskopu kuphela esebenzayo of hlobo yayo ehlabathini.
2000 Xa Tunkinskaya Valley ufakelo cherenkovsky ngokubanzi-engile egqithe ukuba physics isicelo wayethunywe.
2001 I nqila Institute of Social Sciences kwasekwa ukuphumeza-lo msebenzi "eSiberia eRashiya kunye World: Libiza ngokuba Strategies for Development. "
2011 IMIBA, ihamba ne 55 nezinye iiyunivesithi e Russia, waphumelela ukhuphiswano eziququzelelwe yi-Ofisi yoMphathiswa wezeMfundo kunye Science of the Russian Federation ngenxa yenkxaso iinkqubo zobuchule
uphuhliso. Le program yanika inkxaso yophando lwenzululwazi kunye nokudalwa bhaza yemfundo-yezenzululwazi kunye kumaziko ye Irkutsk iziko yenzululwazi
i Siberian yeSebe of the Academy of Sciences.
2013 I-Ofisi yoMphathiswa weMfundo and Science of the Russian Federation isaziso ngokuqukwa Irkutsk State zokufundisa Institute phantsi wapin.
Uyafuna ukuxoxa Irkutsk State University ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
Irkutsk State University kwi Map
iifoto: Irkutsk State University ezisemthethweni kwiFacebook
reviews Irkutsk State University
Dibanisa ukuxoxa Irkutsk State University.
NaseNovosibirsk State University naseNovosibirsk
University of Chemical Technology yaseRashiya eMoscow